Darpan Nepal – महिलाका कुन अङ्गमा स्पर्स गर्दा तुरुन्तै यौन उत्तेजना पैदा हुन्छ
May 17, 2018adminNews0Like
हामीले सहजै बुझेको कुरा पनि हो महिलाहरुको अंग पुरुषहरुको भन्दा बेग्लै हुन्छ । तर पुरुषहरुका लागि कौतुहल्ताको बिषय भनेको महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भन्ने हो । अब भने यो बिषयमा धेरै सोचिरहनु पर्दैन । निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले महिलाको शरीरका कुन अंगको संवेदनशीलता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन् ।
Previous Postमलमासका बेला श्रीमान श्रीमति किन सँगै बस्न हुदैन? याैन सम्पर्क गरे के हुन्छ? (भिडियो सहित) Next Postकम्युनिष्ट जुट्न पनि जान्दछन् : ओली